Nepal Samaya | बालेनका नाममा २८ केजीको खसी बाजी!
बालेनका नाममा २८ केजीको खसी बाजी!
नेपाल समय | काठमाडौं, आइतबार, जेठ १, २०७९
आइतबार, जेठ १, २०७९, काठमाडौं
काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहको नाममा दुई युवाले २८ केजीको खसी बाजी राखेका छन्।
काठमाडौं महानगरमा सुरुवातदेखि नै निरन्तर अग्रता राखेका बालेनको जित र हारमा दुई युवाले बाजी थापेका हुन्। खोटाङका रमेश खड्का र विजय फुयाँलबीच खसी बाजी भएको हो।
बालेनले काठमाडौंको मेयर जिते रमेशले २८ केजीको खसी विजयलाई दिने र बालेन हारे विजयले २८ केजीको खसी बराबरको रकम रमेशलाई दिने सर्त राखिएको छ। उनीहरुले साक्षी किनारासमेत राखेर सर्तको कागजात समेत बनाएका छन्। जुन अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ।
प्रकाशित: May 15, 2022 | 14:51:28 काठमाडौं, आइतबार, जेठ १, २०७९
जब छोरा पाउने विश्वासमा गर्भवतीको टाउकोमा किला ठोकियो...
२१औं शताव्दीमा पनि मानिस धार्मिक अन्धविश्वासमा रहेका छन्। धार्मिक अन्धविश्वासकै कारण पाकिस्तानमा एउटा अनौठो घटना घटेको छ।
जसले १० करोड रङलाई चिन्न सक्छिन्
कन्सेटा एन्टिकोका आँखामा चौथो कलर रिसेप्ट छ। जसले गर्दा उनले १० करोड रङलाई चिन्न सक्छिन्।
श्रीमती साटासाट गर्ने सात जना पक्राउ, एक हजार जना गिरोहमा आबद्ध रहेको आशंका
भारतमा श्रीमती साटासाट गर्ने सात जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
चार वर्षको हुँदा अपहरणमा परेका व्यक्ति ३७ वर्षको हुँदा घर फर्किएपछि...
चीनमा एउटा अनौठो घटना घटेको छ। चीनको युन्नान प्रान्तमा एक युवक ३३ वर्षपछि घर फर्किएका छन्। ली जिंगवेई नामक ती व्यक्ति चार वर्षको उमेरमा अपहरणमा परेका थिए।
अमेरिकाको टेक्ससमा अचानक भयो माछाको वर्षा
यसै हप्ता अमेरिकामा एक अनौठो घटना घटेको छ। अमेरिकाको पूर्वी टेक्ससको टेक्सरकाना सहरमा अचानक आएको तुफानसँगै माछाको वर्षा भएको थियो। यसलाई देखेर मानिस हैरान भएका थिए।